ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခွေးလေး တိုက်ချီဒိုအကြောင်း – အနုပညာရပ်ဝန်း
အမေစုနဲ့ တိုက်ချီဒိုလေးပုံကြည့်ရင်း တိုက်ချီဒိုလေးအကြောင်း သေချာသိချင်တာနဲ့ သတင်းရှာဖတ်မိတယ်။2010ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ လသားအရွယ် တိုက်ချီဒိုလေးကို Kim က အမေ့အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာ.တိုက်ချီဒိုလေးကို ရန်ကုန် မင်္ဂလာစျေးအနီးက ဝယ်ခဲ့တာလို့သိရတယ်။
သားငယ် Kim ရဲ့လက်ဆောင် တိုက်ချီဒိုလေးက အမေစုအတွက် ခွေးတစ်ကောင်ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်၊ ပြောရရင် Kim ရဲ့ ကိုယ်စား အမေစုအနားအဖော်နေပေးမဲ့ အဖော်မွန်လို့ ဆိုရမယ်၊ အမေစုက တိုက်ချီဒိုလေးကို ခွေးလို့ ခေါ်ရင်တောင်မကြိုက်ဖူးတဲ့..သူ့အိမ်ရှေ့မှာ ခွေးကိုက်တတ်သည် လို့ ရေးထားတာကို..ခွေးနေရာကိုဖျက် တိုက်ချီဒိုပုံလေးကပ်ပီး တိုက်ချီဒိုကိုက်တတ်သည် လို့ ပြင်ရေးစေသတဲ့၊ နေပြည်တော်သင်္ကြန်မဏ္ဏပ်ကိုတောင် တိုက်ချီဒိုနာမယ်ပေးဖူးတယ်တဲ့။
Taik chi do
အမေစုက ပြောတယ် တိုက်ချီဒိုကို ရိုက်လည်းမရိုက်ဘူး ဆူလည်းမဆူဘူးတဲ့.. ခေါ်သွားလို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှကိုလည်းခေါ်သွားတက်တယ်.. မတက်သာလို့ ခေါ်သွားလို့မဖြစ်တဲ့နေရာတွေ သွားမယ်ဆိုရင်လည်း တိုက်ချီဒိုကို နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးပီမှ သွားတက်တယ်တဲ့။တစ်ခါက အမေရိကားကို အမေစု ၁၇ရက် ကြာခရီး သွားပီး ပြန်လာတော့ တိုက်ချီဒိုလေးက အမေစုကို အရင်ထက်ပိုပီး အသေကပ်တယ်တဲ့၊ ညဖက်အိပ်ရင်တောင် အမေစု ခြေထောက်ကို ဖက်အိပ်တယ်တဲ့။
တိုက်ချီဒို့စိတ်ထဲ အမေစုက သူ့ကို ပစ်သွားပီလို့ ထင်ပီး သူသာ ခြေထောက်လေးကို ဖက်ထားရင် သူ့ကို ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဖူးလို့ ထင်နေပုံပဲနော်. အမေစုကလဲ ပြောတယ် သူ ခရီးထွက်ခါနီးကျရင် နောက်ဆံ အတင်းရဆုံးက တိုက်ချီဒိုကို အိမ်မှာ ထားခဲ့ရတာပဲတဲ့။မိသားစုဘဝဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့ အမေအို တစ် ယောက်နဲ့ ခွေးလေး တိုက်ချီဒိုတို့ ၂ဦးကြားက နက်နဲခိုင်မာတဲ့ သံယောဇဉ်က သတင်းဖတ်မိတဲ့ကျနော့်စိတ်ထဲ.. အတော်လေး ဝမ်းနည်းမိတယ်..credit
အဆိုတော်လွမ်းမိုး အသစ်တဖန် အသက်ပြန်ရှင်လာသလားလို့တောင် ပြောကုန်ကြပီး
NLD ပါတီတံဆိပ်ပါ ကားအလှဆင်ပြိုင်ပွဲကို မန္တလေးမှာကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထား….
P သုံးလုံးပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကတော့...